အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး ကွန်ဂရက်ပါတီ(လျှောက်ထားဆဲ)၏ (တကြိမ်) နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး ကွန်ဂရက်ပါတီ(လျှောက်ထားဆဲ)၏ (တကြိမ်) နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့
ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၁၀၊ ၂၀၁၃
အမျိုးသားညီညွတ်ရေး ကွန်ဂရက်ပါတီ(လျှောက်ထားဆဲ) ၏ တတိယအကြိမ်မြောက် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ တစ်ခုကို ဇန်န၀ါရီလအတွင်းက အမှတ်၄၀၊ ၁၅၅လမ်း၊ တာမွေမြို့နယ် ဦးလှဝင်းနေအိမ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ အခမ်းအနားသို့ United Kingdom (UK)၊ Canada (ကနေဒါ)၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မြစ်ကြီးနား၊ ဗန်းမော်၊ ပဲခူးတိုင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ဒိုက်ဦးစသည့် မြို့အသီးသီးမှ ပါတီဝင်များ၊ဧည်သည့်တော်များနှင့် မီဒီယာများစုံလင်စွာ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
အခမ်းအနားတွင် အခမ်းအနားမှူး အဖြစ် ပသီဦးလှမြင့်က ဆောင်ရွက်ပြီး သဘာပတိ- ဦးအေးကြူမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း၊ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(၁) ဦးမြင့်ဝေမှ ပါတီပေါ်ပေါက်လာပုံကို ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးနောက် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် (၂) ပသီဦးမောင်မောင်စိုး မှ ပါတီ၏ နိုင်ငံရေးမူဝါဒများ ကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြသည်။ ပါတီအမျိုးသမီးရေးရာ တာဝန်ခံ ပသီဒေါ်ကြည်ကြည်ဌေး မှ“ မွန်းတည့်နေ” စာစောင်တွင်ပါရှိသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမှ ပေးပို့သည့် လူမျိုးစုဆိုင်ရာ သ၀ဏ်လွှာကိုဖတ်ကြားခဲ့သည်။
အခမ်းအနားသို့ ဦးညွှန့်မောင်သျှိန် မှ တက်ရောက်လေ့လာ အားပေးခဲ့ပြီး အထောက်အထားများကို စနစ်တကျ ထိမ်းသိန်းရန် နှင့် ကော်မတီတစ်ရပ်ထားရှိရန် အကြံပြုတင်ပြခဲ့သည်။
သဘာပတိ- ဦးအေးကြူမှ “ပသီတစ်မျိုးသားလုံးနှင့် နိုင်ငံတော်အတွက် ပါတီထောင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လူမျိုးစုအမျိုးသားတွေ တန်းတူအခွင့်အရေးရဖို့၊ အမျိုးသား စရိုက်လက္ခဏာတူတဲ့ လူ့အစုအဝေးပေါ် အခြေခံပြီး မြန်မာတစ်ပြည်လုံးအတိုင်းအတာနှင့် စည်းရုံးသွားမယ်။ ဘာသာနဲ့လူမျိုးမခွဲခြားတဲ့ အခြေခံစိတ်ဓာတ်ကို ထောက်ခံတယ်။ နိုင်ငံရေးမှာ ဘာသာရေးနဲ့ လူမျိုးရေး ခွဲခြားမှုမရှိဘဲ ပသီတစ်မျိုးသားလုံးရဲ့ အကျိုးစီးပွား၊ နိုင်ငံတော် အကျိုးစီးပွား ဖြစ်ထွန်းလာအောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်။ အကျိုးစီးပွားတူ ပါတီတွေနဲ့လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပါတီအမြန်ဆုံး ကျလာမှသာ ရှေ့ဆက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာ ဖြစ်တယ်”ဟု ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ပါတီခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်သော ဦးမြင့်ဝေ မှ“အမျိုးသားညီညွတ်ရေး ကွန်ဂရက်ပါတီကို ၂၀၁၂ နိုဝင်ဘာ ၁၂ရက်နေ့ မှာ ပါတီမှတ်ပုံတင်ကြေး ငွေသုံးသိန်းသွင်းပြီး မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ နိုဝင်ဘာ၊ ၁၃ရက်နေ့မှာ သတင်းစာတွေမှာ ပါတီအလံနဲ့ တံဆိပ်ကို သတင်းထဲမှာ ထည့်သွင်းလျှောက်ထားပြီး ကန့်ကွက်သူရှိပါက ၇ ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ကန့်ကွက်မယ့်သူ မရှိပါဘူး။ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် အရဆိုလျှင် တစ်လအတွင်းမှာ ပါတီမှတ်ပုံတင် ကျရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နှစ်လကျော်သွားတာတောင် ပါတီမှတ်ပုံတင် မကျသေးပါဘူး။ ပါတီမှတ်ပုံတင် မကျသေးရင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို စာရေးပါ့မယ်။ ပါတီကျလာဖို့ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်”ဟုM-Media သို့ပြောကြားခဲ့သည်။
ပါတီ၏ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ ပသီဦးလှမြင့်မှ“အမျိုးသားရေးဝါဒမှ လူမျိုးစုံ သွေးစည်းရေး ၀ါဒသို့ …ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်အရ၊ ပသီကွန်ဂရက်ဆိုပြီးထောင်တယ် စနစ်တကျပေါ်ထွန်းရေး၊ ပသီလူမျိုးစုကို တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတစ်ခုအဖြစ် နိုင်ငံတော်အစိုးရက လက်ခံအသိအမှတ်ပြုလာအောင် ကြိုးစားရေးသည် ပါတီရဲ့ အဓိကတာဝန် ရည်မှန်းချက်ပါ။ တရားဥပဒေဘောင် အတွင်းမှ အထောက်အထားခိုင်လုံစွာဖြင့် နည်းမျိုးစုံ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု ဖြစ်လာရေး – ဒုတိယအချက်က – အခြားသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုငယ်များ၏ ရပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးများ ၊နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး လူ့အခွင့်အရေးများ မဆုံးရူံးစေရေး နိုင်ငံတော်မှ အသိအမှတ်ပြု ဖော်ဆောင်ပေးရန် ၀ိုင်းဝန်း၍ ရရှိအောင်ကြိုးစားသွားမည်။ တတိယ အချက်က -ပသီတိုင်းရင်းသားများ၏ ပညာရေး စီးပွားရေး လူမှုရေး နိုမ့်ကျမှုတွေကို လူနည်းစု လူမျိုးစုငယ်များ နှင့် ပူးပေါင်းပြီး မြင့်တက်အောင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ ပသီတိုင်းရင်းသား အရည်အတွက် စာရင်းနှင့် တကွ လူဦးရေနှင့် တကွ ဖော်ထုတ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်။
ပြန့်ကျဲနေသော လူမျိုးစုများ ဖြစ်တဲ့အတွက် နယ်မြေ သို့မဟုတ် ပြည်နယ် တောင်းခံမည်မဟုတ်။ မြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့ ကာကွယ်ရေး ကိစ္စများတွင် အခြားလူမျိုးစုများနှင့်အတူ ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်။ ပသီလူမျိုးစုရဲ့ ယဉ်ကျေးမှူ၊ စာပေ၊ ဓလေ့ထုံးစံ အသိအမှတ်ပြု မှတ်တမ်းတင် ထားရှိရေး၊ လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ရေး၊ အခြားသော မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ နေထိုင်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများနှင့်အတူ တန်းတူညီမျှစွာ ခံစားရယူလိုပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု ရှိရပါမည်။ ပသီလူမျိုး ဘာသာမတူ လူမျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ သို့သော်လည်း သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းချက်အရ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစ်ဟာန်ဘာသာ မည်သည့်ဘာသာဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ပသီလူမျိုးအဖြစ် လက်ခံပါတယ်”ဟု M-Media သို့ပြောကြားသည်။
ပါတီခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်သော ဦးမောင်စိုးမှ “မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ ပါတီတွေ မှတ်ပုံတင် ရဖို့အတွက် တင်တဲ့အခါမှာ နှစ်နဲ့ ချီကြာတာဆိုလို့ ကျွန်တော်တို့ပါတီပဲ ရှိတဲ့အတွက် ၀မ်းနည်းပါတယ်။ ဒီလကုန်မှ မကျရင် နိုင်ငံတော်သမ္မတဆီရယ်၊ လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ဆိ စာပို့မယ်။
မြန်မာမူစလင်ခေါ် ပသီတော်တော်များများဟာ ကျွန်တော်တို့ ပါတီကျလာပြီဆိုရင် ပျော်ရွှင်ကျမယ် ၀မ်းသာကြမယ်။ ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူမျိုးစုအသီးသီး ပါတီထောင်ကြတယ်။ မြန်မာမွတ်စလင်တွေဟာလည်း ငါတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီကြီး ပေါ်လာပြီဆိုပြီး နှစ်ပေါင်း ၆၀ လောက် တိမ်မြုပ်နေတဲ့ ဆရာကြီးဦးရာဇာတ် ပါတီ ဗမကလိုပဲ ပြန်လည်ပေါ်ထွန်းလာပြီဆိုပြီး သူတို့ဝမ်းသာကြမယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ လူမျိုးရေးပါတီ အသီးသီးဟာ လွတ်လပ်စွာ လူမျိုးစုံပါဝင်တဲ့ ပါတီညီလာခံကြီးကို အမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မယ်လို့ မျှော်လင့်တယ်။ တိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်နေသော လူမျိုးစုများနှင့် ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီ လူမျိုးရေးပါတီများစွာ ၀ိုင်းဝန်းပြီး ဆောင်ရွက်ပေးရမယ် မြန်မာနိုငငံမှာ တိကျတဲ့ လူမျိုးရေးစရင်းနဲ့ လူဦးရေ စာရင်းကို ပူတွဲပြီး သက်မှတ်ပြဌာန်းရန်လိုပါတယ် အချို့လူမျိုးစုများက အမည်နာမ အမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်။ အမည်မှန်ပေါ်ပေါက်ရေး အထူးလိုအပ်တယ်””ဟု M-Media သို့ပြောကြားသည်။
အမျိုးသားညီညွှတ်ရေး ကွန်ဂရက်ပါတီ (လျှောက်ထားဆဲ) ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ
– ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း မှီတင်းနေထိုင်းသော မြန်မာနိုင်ငံသူ မြန်မာနိုင်ငံသား လူမျိုးနွယ်စုအား ကိုယ်စားပြုသည့် အမျိုးသား အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ရပ်တည်သွားရန်
-မြန်မာနိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသား လူမျိုးနွယ်စု အားလုံး၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှု ရှိစေရေးကို ထိန်းသိမ်းဖော်ဆောင်သွားရန်
-မြန်မာနိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသား လူမျိုးနွယ်စုများအား အဆင့်အတန်းခွဲခြားမှု မရှိဘဲ၊တရားမျှတခြင်း၊ လွက်လပ်ခြင်း၊ တန်းတူညီမျှခြင်း၊ လွက်လပ်စွာ ဖော်ထုတ်ရေးသားပြောဆိုနိုင်ခွင့် ရရှိစေရေး၊ လွတ်လပ်စွာ စီပွားကုန်သွယ်လုပ်ပိုင်ခွင့် ရရှိစေရေး စသည့်အခြေခံ ရပိုင်ခွင့်များကို ရရှိခံစားစေပြီး စစ်မှန်သော ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး ပေါ်ပေါက်လာစေရန် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုပါတီ၏ ဆောင်ပုဒ်မှာ “အမျိုးသားရေး ၀ါဒမှ လူမျိုးစုံ သွေးစည်းရေး ၀ါဒသို့- ” ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
This entry was posted on February 11, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ရိုဟင်ဂျာတွေကိုအတင်းအဓမ္မဘင်္ဂလီလို့ရေးခိုင်း၊ ထွက်ပြေးသွားအောင်နည်းမျိုးစုံ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းကို အစိုးရကိုယ်တိုင်ကလုပ်ဆောင်နေ …
နိုက်ဂျီးယားမှ ၃ နှစ်သမီး ကမ္ဘာ့ အသက်အငယ်ဆုံး ကုရ်အာန်ကျမ်း အာဂုံဆောင် နိုင်သူဖြစ်လာ →